သာလွန်ဇောင်းထက်| February 14, 2013 | Hits:15,289
| | ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းကို စစ်ဆေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မြ၀တီ)
မြန်မာကို လုံခြုံရေး အကူအညီ ကန့်သတ်မည့် အမေရိကန် ဥပဒေကြမ်း သမ္မတရုံး ဝေဖန်တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ရာထူးတချို့ အပြောင်းအလဲ လုပ်အသုံးချခံ ယန္တရားနဲ့ ကလေးတယောက်ရဲ့ ဘ၀အိပ်မက်မြန်မာ-အမေရိကန် စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးအပေါ် အမြင်များ ကွဲပြားတိုက်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပြီး ဖားကန့်ဒေသခံ ၂၀၀ ခန့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှု ဖြစ်ပွား
Shwe Yoe February 14, 2013 - 11:44 am They may think themselves as better than the public. Actually, they were the ones who dragged our country back to Stone Age. If these people with green uniforms know better than us, we will not need reform. But the history proves that they are no more than idiots.
Reply pps12345 February 14, 2013 - 12:41 pm တပ်မတော်အတွင်း မှာ ရာထူးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို စားပေါက်ထွင်ပြီး နေရာဖယ်ခိုင်းတာ ဗိုလ်နေဝင်း အိမ်စောင့် အစိုးရ လက်ထက် ကတည်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုပါ။
Reply angel February 14, 2013 - 2:32 pm စစ်တပ်မျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကကျဉ်ဆန်တွေကြား
Reply Win Myint February 14, 2013 - 3:41 pm သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းကို ခန့်အပ်ခြင်းသည် ကာချုပ်ကျေနပ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်
Reply maungtan February 14, 2013 - 4:09 pm စစ်သင်တန်းဘွဲ.ရဆိုတော. ဆက်ဆံရေးကျွင်းကျင်မှာပါ။ ဟာဟာဟာဟာ
Reply maungtan February 14, 2013 - 4:15 pm စစ်သင်တန်းကျောင်းဆင်းဆိုတော.မြတ်ဟိန်းကဆက်ဆံရေးကျွင်းကျင်မှာပါ။ဟာဟာဟာဟာ
Reply မင်းမင်း February 14, 2013 - 7:23 pm တိုင်းရင်းသားများ ဘယ်နေရာမှာ ပါရမှာလဲ။ တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်စရာမလိုသေးလို့လား၊ ဆက်သွယ်ရေးတို့၊ ဘာတို့၊ ညာတို့၊ နည်းပညာပိုင်းကအစပေါ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆိုရင် တကယ် မရှိသေးတာ အားလုံးအမြင်ပဲ။ ရှိစရာမလိုသေးလို့ ဟုတ်မှာ။
Reply aung naing February 14, 2013 - 8:57 pm Ko Myat Hein is more D.S.A senior intake than Ko Min Aung Hlaing………..So ,he want to take out from military because of senior man…..That’s why they negotiate…….
Reply ပါကြီးဖိုး February 14, 2013 - 9:22 pm ယနေ့ခေတ် စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကိုယ်ကျိူးစွန့် အနစ်နာခံမှု၊ ပြည်သူနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်မှု…စတဲ့ ကောင်းတဲ့စ်ိတ်ဓါတ်အမွေကို မရရှိခဲ့ဘဲ ဦးနေဝင်း၊ ဦးသန်းရွှေတို့လို အာဏာရှင်များထံမှ ငါ့အတွက် ငါ့မိသားစုဆွေမျိူးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ငါ့လူတွေအတွက် ဆိုတဲ့ ငါအတ္တရှေ့တန်းတင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်အမွေကိုသာ ရရှိခဲ့ပုံရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်တွေက တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ကျိကျိတက် ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ သူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။
Reply K Z Y Htun February 15, 2013 - 7:57 am If President U Thein Sein appoints U Myat Hein asaminister, it will beawrong move made by U Thein Sein. U Thein Sein should, at least, explain why he prefers U Myat Hein to beaminister.
Reply K Z Y Htun February 15, 2013 - 8:01 am This is the wrong move made by U Thein Sein. Hopefully, this move will not affect his party in the election of 2015.
Reply lwinhtaytunwai February 15, 2013 - 9:46 am ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။စစ်အကျီင်္ချွတ်ပြီးသမ်မတဖြစ်လာတာကိုး။သူ့လူကိုပဲ့ခန့်မှာပေါ့။ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှာပါလို့မရဘူးဆိုတာသိပါလျှက်နဲ့တမင် လုပ်တာ။အခုထိနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတုန်းပါပဲ့လား။အတော်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
Reply rocker February 15, 2013 - 10:12 am မြန်မာပြည်ကြီးပြောင်းလဲနေပီဆိုဘယ်သူကပြောတာလဲ?
Reply rocker February 15, 2013 - 10:20 am သူတို့မဖြစ်မနေပြောင်းရမယ့် တစ်နေရာတော့ရှိတယ်
Reply မြန်မာပြည်သား February 15, 2013 - 11:49 am စစ်တပ် ကလူပဲ ခန့်မှာပေါ့။
Reply aungkyawsan February 15, 2013 - 2:52 pm အခု ထက်ထိ အရင်အတိုင်းပါပဲ ၀န်ထမ်းတွေ ကိုလစာ တိုးပေးဖို့ ကျ တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ ပြောတယ်.. တပ်က ဌာနဖက် ပြောင်းလာ တဲ့ လူတွေ ကျ တော့ တပ်ပင်စင်ေ၇ာ ဌာန လစာ ရော ပေးထား တော့ သူ တို့လူ တွေ က (၁လ)ကို (၂လ) စာ ရပြီး သားလေ၊၊၊၊၊
Reply arthur win thu February 15, 2013 - 3:11 pm Just the birds with the same feather fly together. I would like to suggest to the innocent people of Myanmar not to expect too much from the Mr President.
Reply မင်းကြီးညို February 17, 2013 - 10:12 pm ဒါတွေက သမ္မတကြီးရဲ့ခန့်ထားပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလေ၊ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။ အမေရိ
Reply maung Ko ko February 18, 2013 - 11:05 pm အရည်အချင်းကို မကြည့်ပဲ သမ္မတကြီးနှင့် နီးစပ်သူကို ခန့် ခြင်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများနှင့် နီးစပ်သူကို ခန့် ခြင်း၊ကိုယ်တပည့်မဟုတ်သူတို့ကို ဖြုတ်ချခြင်း တို့ သည် သမ္မတကြီးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် အရ ဖြစ် ၍ ပြည်သူများက အကြံပြု လို့ ရမည် မဟုတ်ပါ။ သို့ သော် သမိုင်းကပြောပါလိမ့်မည်။
Reply sunny February 28, 2013 - 7:53 am Will myanmar change the way to democracy? Talk is lound but actions remain the same as their predecessor, Ne Win and Than Shwe.